Laissez moi un message madonastiana : Izaho afaka manampy anao raha misy zavatra mahaliana anao momba ny Baiboly gasysoft : Tena tsara tokoa ny hetahetanao. Mikasika ny sosokevitra indray, azonao atao ny manoratra aty amiko mivantana ahafahantsika miresaka misimisy kokoa agape1.
Maiarahaba anao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Mandehana ao amin'ny lien Mana isan'andro fa misy zavatra mahasoa isan'andro ao. Tsy mikatona mihintsy izy io rabefa : Mirary soa Jaona : Misaotra indrindra fa tena tsara, omen'Andriamanitra fahaizana mandrakariva e! Fidy Bariniaina : mahafa be asan'ny Tompo,tena manampy be ilay izy,afaka mba mahazo ve ampiasaina aty an-trano sy aty ampiangonana crazafimandimby gmail. Misaotra Dopao : Miarahaba e!
Raha mba mety tompoko dia mba alefa ty adresse ty doinfographist gmail. Mankasitraka tompoko. HAsiniavo : Tsy mandeha intsoiny ilay lmioen anareo ao amin'ny OneDrive : gasysoft : Ialana tsiny raha izao vao afaka mamaly anareo, fa efa tsy dia mijery loatra ity blaogy ity intsony aho, noho ny fahateren'ny fotoana.